Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Dadku waxay naftooda la cararaan markii volcano Java uu qarxo
Qaraxii Semeru ayaa argagax ku abuuray dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha, iyagoo cabsi darteed uga soo cararayay daruur dambas madow ah oo ka soo degtay buurtan oo dhirirkeedu yahay 3,676 mitir.
Dadka deggan jasiiradda Indonesia ee Java, kuwaas oo ku nool cagtooda Volcano Semeru, waxay ku qasbanaadeen inay naftooda la baxsadaan iyadoo foolkaanadu ay maanta si xoog leh u qarxday, oo ay ka soo saartay daruur dambas ah oo qorraxda qarisay.
Muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa qabsaday dad ku qeylinaya "Allaahu Akbar" (Ilaah baa weyn) iyagoo wajahaya muuqaalkan runta ah.
Daruur dambas ayaa lagu soo waramayaa inay sare u kacday ilaa 15,000 oo mitir hawada, taasoo keentay digniin ku socota shirkadaha diyaaradaha. Warbaahintu waxay sheegtay inay gabi ahaanba ka xidhatay cadceedda meelaha u dhow qaraxa.
Ilaa hadda ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay folkaanaha. Samatabbixiyeyaasha ayaa u soo baxay goobta si ay u caawiyaan kuwa dhibaataysan.
Semeru waa foolkaano firfircoon oo bari ah Java gobolka. In ka badan 50 qarax ayaa la duubay tan iyo 1818, kii ugu dambeeyay, ilaa hadda, oo dhacaya Janaayo.
Indonesia Waxay ku taal waxa loogu yeero 'Ring of Fire' - oo ah dhul foolkaanooyin ah iyo khadadka cilladaysan ee Badweynta Baasifigga - sidaas darteed dhulgariirrada iyo qaraxyadu waxay aad ugu badan yihiin waddanka jasiiradaha ah ee 270 milyan.